Ogaden News Agency (ONA) – Waxay ka mid tahay geedi-socodka halganka lamase iloobi doono geesiggii Cabdi Cabdullaahi Sayid
Waxay ka mid tahay geedi-socodka halganka lamase iloobi doono geesiggii Cabdi Cabdullaahi Sayid
By Ali Yare –
Marka hore waxaan tacsi iyo baroor diiq u dirayaa dhamaan shacabka Somalida Ogadeniya geeriddii naxdinta lahayd ee ku timid halgame Cabdi Cabdullaahi Sayid. Gaar ahaan waxan tacsi qodo dheer u dirayaa qoyskii uu marxuumku ka baxay, waxanan illaahay uga baryayaa inuu wax khayr qaba ugu badeello samir iyo imaana ka siiyo.
Ma iloobi doono geesiyaddii u naf waayey halganka xorinimo doonka ah ee shacabka Somalida Ogadeniya kula jiraan gumeysiga wayaanaha. Halyeeyaddii cabdi Cabdullaahi ugu dambeeyey ee gacanta nacabka ku baxay waxay baaqi ku noqon doonaan xusuustayada, waxan taariikh nololeedkooda ku dhigi doonaa iskuulada, waxan magacooda bari doonaa ubadkayaga, waxan u dhisi doonaa taalooyin xusuus ah, waxaanu ku xusi doonaa bogaga taariikhda ee Ogadenia.
Kii halganka xaqa ah ee Ogadenia ka socda u dhintey, kii u dhaawacmay, kii u dhididay iyo kii u dhibtoodayba aakhirana ajar iyo xasanaad bay illaahay agtiisa ka heli adduunkana sharaf iyo cisi baa abid lagu xusuusan.
Cabdi Cabdullahi hadafkiisii lumimaayo, hindisihiisii laga leexan maayo, himilooyinkiisii laga gaabin maayo halgankii uu naftiisa u waayeyna hakan maayo.
Cabdi cabdullaahi iyo intii ka horeysay ee ku shihiiday halganka ka socda Ogadenia waxay ku talo galeen inay u hibeeyaan naftooda iyo dhiigoodaba dadkooda, diintooda iyo dhulkooda hooyo sidaa darteed geeridu ha ahayn mid cabsi ku haysay ama ku haysaba. Waxay u ahayd geeru goorma ayey iman balse uma hayn maxay u iman iyo sababtay u iman.
Sidaa darteed geerida Cabdi Cabdullaahi shacabka Somalida Ogadeniya marnaba kuma beeri doonto cabsi balse waxay ku beeri calool adayg. Ma niyad jabin doonto balse waxay abuuri dhiirani hor leh iyo adadayg. Haganka ma dibin daabyeyn doonto balse waxay ku abuuri dardar iyo dadaal dheeri ah. Geerida cabdi cabdullahi waxay sii siyaadin doontaa cadhada shacabka Somalida Ogadeniya u qabo gumeysiga wayaanaha ee sida waxashnimada leh u gumaadaya.
Ma aha wax lala yaabo in maanta taliska Tigreega ahi uu naf moodo inuu shirqool iyo uus xabaal ka dhex fuliyo wadamo xor ah waayo wuxuu ku fashilmay dhamaan goobihii dagaalka ee Ogadenia iyo kuwa siyaasadeed ee golayowga caalamiga ah layskaga hor imanayey. Markasta oo gumeysi wakhtiguusu dhacayo waxaa lagu gartaa wuxuu ku dhaqaaqaa ficilo naf la caarinimo leh oon ka fiirsasho lahayn. Wuxuu si cadho leh u fuliyaa falal aan siyaasad ahaan iyo istaraatajiyo ahaan midna faaiido u lahayn sababtuna waa guuldarooyinka soo wajahay ee aan xalka lahayn. Waxan xusuustaa South Africa markii xukunkii midab kala sooca la tuurayey waxaa la dilay hogaamiye sare oo ANC ah bilo ka hor intii aan Mendela la dooran. Dilka Cabdina waa mid la mid ah kaas waayo Meles wuxu arkay inuu xukunkiisii sii gabaabsi yahay. xaalkiisuna wuxuu isugu soo ururay aar goosi iyo shacab xasuuq taasina horey uma shaqaynin maantana ma shaqayn doonto.
Zenawi waa sirin sirqo ee waa inaan xadhiga ku sii dhuujinaa si aan shulka sharafta leh ee khayraadku ceegaago ee Ogadenia uga safayno uguna aarno intii geesi inaga shihiiday.